नेपालमा थप २ जनामा कोरोना संक्र`मण, संक्र`मितको सं`ख्या ४७ पुग्यो – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/नेपालमा थप २ जनामा कोरोना संक्र`मण, संक्र`मितको सं`ख्या ४७ पुग्यो
थप दुई जनासहित कोरोना भाइरस सङ्क्र`मितको सङ्ख्या ४७ पुगेको छ । स्वा`स्थ्य तथा जनस`ङ्ख्या` मन्त्रालयलको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आज थप दुई व्य`क्तिमा कोरोना सङ्क्र`मणको पु`ष्टि भएको मन्त्रा`लयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रा`लयका अनुसार उदयपुरका ५५ वर्षीय महिला र जनकपुरका १४ वर्षी`य किशोरमा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो ।
त्यसैगरी हालसम्म कोराना भाइरसबाट निको हुनेको सङ्ख्या नौ पुगेको छ । केही दिन अगाडि काठमाडाँैको पेप्सीकोला स्थित सनसीटी अपार्ट मेन्टमा देखिएको कोरोना सङ्क्र`मित दुवै व्यक्ति निको भई आज डिस्चा`र्ज हुनुभएको छ । पाटन अस्पतालमा उपचाररत ५८ वर्षीय पुरुष र ८१ वर्षीय महिला निको भई घर फर्कनुभएको हो ।
मन्त्रा`लयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार उपचाररत कोरोना सङ्क्र`मित व्यक्ति सबैको स्वा`स्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ । त्यसैगरी रा`ष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा सन्तोष पौडेलले आफ्नो अस्पतालले अत्यावश्यक सेवा र ओपीडी सेवालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि पिपिईको व्यवस्था गरी उपचारमा खटिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अस्पतालले अनलाइन र फोनका माध्यमबाट पनि बिरामीको स्थिति बुझ्ने` गरेको बताउनुभयो । जो कसैलाई पनि समस्या परेमा अस्पतालको फोन नम्बर ०१४२२५२७५ र ९८४०८८३०५५ मा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सकिने अस्पतालका प्रमुख पोडेलको भनाइ छ ।
शंखरापुरमा आज गरिएको टेस्टमा १४ जनामा RDT पोजेटिभ, !!